1550nm 20mW SM Fiber နှင့်လေဆာရောင်ခြည် Diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် > 1550nm 20mW SM Fiber သည်လေဆာရောင်ခြည်ကိုဆက်သွယ်ပေးသည်
1550nm 20mW SM Fiber သည်လေဆာရောင်ခြည်ကိုဆက်သွယ်ပေးသည်
1550nm 20mW SM Fiber Coupled Laser Diode ကိုအဓိကအားဖြင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အကွာအဝေး optical ဆက်သွယ်ရေးအတွက် optical signal အဖြစ် fiber fiber sensing, 3D sensing, gas sensing နှင့် respiratory ကဲ့သို့ရောဂါရှာဖွေခြင်းစသောအသုံးချမှုအသစ်များကိုအဓိကအသုံးပြုသည်။ နှင့်သွေးကြောစောင့်ကြည့်။ ဓာတ်ငွေ့အာရုံခံခြင်းနယ်ပယ်တွင်၎င်းသည်စက်ရုံပိုက်များမှမီသိန်းဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုကိုစစ်ဆေးသောဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာများအတွက်အလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
1550nm 20mW SM Fiber ကိုဆက်သွယ်ထားသော Laser Diode ၏အနှစ်ချုပ်
1550nm 20mW SM Fiber နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလေဆာ Diode ၏နိဒါန်း
3. 1550nm 20mW SM Fiber နှင့် Laser Diode တို့၏ထူးခြားချက်များ
output ကို 20mW;
optical isolator, photo diode နှင့် cooler တို့ပါ ၀ င်သည်။
FC / APC သို့မဟုတ် FC / PC ဖိုင်ဘာချိတ်ဆက်ထားသော connector ။
၄။ 1550nm 20mW SM Fiber ကိုအသုံးပြုထားသော Laser Diode ကိုအသုံးပြုခြင်း
CWDM / DWDM optical ဆက်သွယ်မှု;
LAN, WAN နှင့်မက်ထရိုကွန်ရက်များ၊
CW 1550nm လေဆာအရင်းအမြစ်။
1550nm 20mW SM Fiber နှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလေဆာ Diode ၏ 5. Electro-Optical ဝိသေသလက္ခဏာများ (T = 25â "ƒ)
လှိုင်းအလျားအလယ်ဗဟို အိုင်စီ TL = 15ï½ž35â "ƒ CW 1548 1550 1552 nm
optical output ကိုပါဝါ PO - 20 - - mW
ဆင်ခြေလျှောထိရောက်မှု ƞ CW output ကို 10mW 0.05 0.11 0.2 mW / mA
operating လက်ရှိ ဟုတ်ပြီ PO = 20 mW (CW) - 200 300 mA
ရောင်စဉ်တန်းလိုင်းအကျယ် LW FWHM -2- MHz
လေဆာရှေ့သို့ဗို့အား VF CW output ကို 20mW - - 3.0 V
TEC စွမ်းရည် Î” T TC = 70â " - - 50 ℃
15âမှာ "35â" ရန် - 0.09 - nm / â
၆။ အထုပ်ပုံနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) 1550nm 20mW SM Fiber Coupled Laser Diode ၏အဓိပ္ပါယ်။
Laser Diode သည် 1550nm 20mW SM Fiber နှင့် တွဲဖက်၍ လေဆာဖြင့်ပို့ဆောင်ခြင်း
hot Tags:: 1550nm 20mW SM Fiber Coupons Laser Diode, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကား, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်, အမြောက်အများ, တရုတ်, တရုတ်နိုင်ငံ၌ထုတ်လုပ်, စျေးပေါ, စျေးနှုန်းနိမ့်, အရည်အသွေး